Kiantranoantrano… mampiditra angano | NewsMada
Adihevitra be teny anivon’ny Antenimierampirenena ny And. 19 amin’ny lalàna mifehy ny fifandraisana. Tsy inona fa ny amin’ny tsy fahazoana mamoaka vaovao amin’ny hoe fivoriana mikaton-trano. Tsy nahita afa-tsy ny eo ambany masony ny sasany? Na mahin-dava sy tsy matoky tena amin’izay lazainy sy ataony…
Na inona na inona heverina ho fivoriana miafina sy afenina, misy tsara na tokony ho fantatry ny vahoaka. Ndeha hoborina fotsiny hoe tsy azo avoaka? Raharahan’ny vahoaka ny ampindramany fahefana ny mpitondra isan’ambaratonga sy isan-tsehatra. Na mpanao lalàna izany, na mpitsara, na mpanatanteraka.
Misy ny tsara sy tokony ho fantatry ny vahoaka manan-jo hahalala sy hahazo vaovao, afa-tsy izay lazaina sy heverina ho tsiambaratelom-panjakana, angaha, na manakorontana ny tany sy ny fanjakana… Hoborina sy hampangaina fotsiny amin’ny hoe fivoriana mikaton-trano ka tsy azo avoaka izay vaovao manohintohina mpitondra?
Aiza ary ahoana no hahalalan’ny vahoaka izay mety hataon’ny mpitondra amin’izany? Kiantranoantrano hatrany, ohatra, ny fanaovana kolikoly na amin’ny mpanome na mpandray, ny fitakiana tombontsoa manokana, ny fitadiavana tambiny na fanambazana amin’itsy na iroa; eny, na ny fanodinkodinam-bolam-bahoaka aza.
Ahoana, ohatra, no hivoahan’ny Raharaha kolikoly teny amin’ny Paon d’or, Ivato, taona 2018, raha tsy nisy ny famoahana ny fivoriana miafina tamin’izany? Na ny fandehan’ny toe-draharaham-pirenena aza, angamba, tsy tonga amin’izay misy sy iainana amin’izao fotoana izao, fa nanjaka ihany ny kolikoly mahery vaika.
Izay vaovao mahametimety sy tsy manohintohina ny mpitondra ihany àry ve izany no azo sy tsara avoaka? Ny ankoatra izay, sivanina mialoha amin’ny hoe tsy azo avoaka, fivoriana mikaton-trano… Mandroso sa mihemotra ny firenena amin’izany? Na tsy matoky tena amin’ny raharaham-bahoaka ataony ny sasany…
Tsy inona fa mbola kiantranoantrano… mampiditra angano, rehefa tsy atao na atahorana ny fangaraharana sy ny mazava misy fisokafana?